မြက်ရိတ်စက် PATCO နှင့် မက်ဖြတ်စက်4ဘီး PATCO
မြက်ဖြတ်စက်, ပခုံးပိုးမြက်ရိတ်စက်, ကျော်ပိုးမြက်ရိတ်စက်, မြက်ရိတ်စက်, မြတ်ခင်းစက်, မြက်ရိတ်စက်အစိတ်အပိုင်း
HONDA / RABBIT / MITSUBISHI မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်တို့မှ PATCO POWER ၏ ကျော်ပိုးမြက်ရိတ်စက်
1. HONDA GX35 အင်ဂျင်က ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့်အာရှဟွန်ဒါမော်တာ ကုမ္ပဏီ လီမီတက်၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။
2. ခိုင်ခံ့သည့်မြက်ခင်းစုံက အနည်းစုံး ၃၀ နှစ်ကျော် မြက်ခင်းစုံထုတ်လုပ်ခဲ့သော PATCO စက်ရုံမှ စစ်ဆေးမှုထောက်ခံသည်။
3. ချောဆီအရည်ကြည်စနစ်တိုးမြှင့်သောကြောင့် မြက်ခင်စုံအင်ဂျင်၏စွန့်ပစ်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။
4. အာရှဟွန်ဒါမော်တာ ကုမ္ပဏီ လီမီတက်မှ အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းထောက်ခံသည်။
5. အသုံးပြုမှုတွင် လုံခြုံစိတ်ချရမှုအတွက် “မျက်မှန်” ကို တပ်ဆင်ထားသည်။
6. အလွယ်တကူအရှိန်မြှင့်နိုင်ရန် ပါဝါခလုတ်နှင့်အတူ အစပျိုးအမျိုးအစားဖြည့်စွက် ဖြစ်သည်။
7. တုနန်ခါမှုနှင့်ပျက်စီးမှုလျှော့ချစေရန် ကြီးမားသောရိုးတံ 28 မီလီ (နှင့်) ရေမြှုပ်တို့ကိုရှိသည်။
8. ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်သော ဒါး2စုံရှိသည်။
9. သံမဏီ SK-5 ဖြင့် မြက်ရိတ်စက်၏ဒါးပြုလုပ်ထားသည်။
10. ကြီးမားသည့်ဂီယာခေါင်းက တာရှည်ခံစေသည်။
11. မြက်ရိတ်ကိရိယာစုံတွဲက အင်ဂျင်မှ ပါဝါကို လက်ခံရရှိခြင်းအားဖြင့် လွဲဒါးကို ဖြစ်ပါသည်။
12. ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ကိရိယာများက တစ်ယူနစ်တွင် အဓိကပစ္စည်းကိရိယာ 1 စုံ ရှိသည်။
မော်ဒယ် PATCO 19
အင်ဂျင်အသေးစိတ် HONDA Model GXV 160 Hz
4 ရိုက်ချက်၊ လေအားဖြင့် အအေးပေးစနစ်, ဆလင်ဒါအပေါ် ဗား, စုပ်တစ်ခု, ရိုးတံ
အသားတင်အင်ဂျင်ပါဝါ 3.2 KILO WATT (4.4 Horse Power) 3,600 rpm
ဆလင်ဒါ x လေဖြတ်ချိန် 68 x 45 mm.
ဆလင်ဒါစွမ်းရည် 163 CC.
အများဆုံးလည်ပတ်မှု 2,500 rpm တွင် 9.6 နယူတန်မီတာ (0.98 ကီလို-မီတာ)
လောင်စာဆီတိုင်ကီအရွယ်အစား 1.6 L.
စက်ဆီသုံးစွဲနှုန်း 1.1 L/Hr.
စက်ဆီအသားတင်ပမာဏ 0.6 L.
**(SAE J1349 အဆင့်အတန်း)
- ဂျပန်နိုင်ငံမှ MITSUBISHI မော်ဒယ် TU43 အမှတ်တံဆိပ်သည် လေအားဖြင့် အအေးခံနိုင်သော 1 စုပ်2ချက် ပါသောဘင်စင်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ဖြစ်သည်။
- အင်ဂျင်အရွယ်အစား2မြင်းကောင်ရေ (42.7 စီစီ) အမြန်နှုန်း 7000 rev / min ဖြစ်သည်။
- လောင်စာဆီတိုင်ကီသည် 0.9 လီတာရှိသည်။
- အင်ဂျင်အမြန်နှုန်းပြောင်းစေရန် အင်ဂျင်၏လွှဲနှုန်းထိန်းကိရိယာနှင့်အတူ လက်ကိုင်ပစ္စည် အင်ဂျင်တွင် အထူးသတ္တုဖြင့် ဖုံးထားသည့်အတွင်းပိုင်းရိုးတံကြီး ရှိပါသည်။ အမြီးရိတ်စက်၏အဆုံး၌ တပ်ဆင်ရန် ခြစ်ပါသည်။
- မြက်ဖြတ်စက် အင်ဂျင်မှ ပါဝါကို ရရှိခြင်းအားဖြင့် ဒါးလွှဲအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ကိရိယာများက တစ်ယူနစ်တွင် အဓိကပစ္စည်းကိရိယာ 1 စုံ ရှိသည်။
မော်ဒယ်/ပုံစံ HONDA GX35
အင်ဂျင်အသေးစိတ်4ရိုက်ချက်၊ ဆလင်ဒါအပေါ် အိုဗာဟစ်ဗား
ဆလင်ဒါအတိုးအကျယ် 35.8 CC.
ဆလင်ဒါ x လေဖြတ်ချိန် 39.30 mm.
အများဆုံးမြင်းကောင်ရေ 1.0 KILO WATT (1.4 Horse Power) 7,000 rpm
အများဆုံးလည်ပတ်မှု 5,500 rpm တွင် 1.60 နယူတန်မီတာ (0.16 ကီလို-မီတာ)
စက်နှိုးစနစ် Transistor Max Nito
မီးပွားပလပ် CM5H/CMR 5H(NGK)
စက်ဆီအသားတင်ပမာဏ 0.1 L.
အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သောအပူချိန် -5 C to 40 C (23 F to 104 F)
လောင်စာဆီတိုင်ကီအရွယ်အစား 0.63 L.